भाषा भाषी Archives - Archive -
नर्सले बिरामीलाई टीका लगाइदिँदा …
cinekala-बिरामी परेर अस्पताल भर्ना हुनुपर्दा चाडपर्व मनाउन सम्भव नै भएन । सबैले पर्व मनाइरहँदा बिरामी भने विगतका पर्व सम्झेर अस्पतालको श्यया मै टोलाएर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा आज फरक दृश्य देखियो । अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई त्यहाँ कार्यरत नर्स एकाएक दिदी बहिनी बनेर भाइटीका लगाइ दिए । पर्व सम्झदै बसेका बिरामीमा एकाएक खुशीको...
तिहारबारे नेवार समुदायमा अन्योल
cinekala गत वर्षझैं यस वर्ष पनि नेवाः समुदायमा तिहार पर्व अर्थात् ‘स्वन्ति नखः’ मनाउने दिनबारे अन्योल छाएको छ । तर, नेपाल संवत् ११४१ नयाँ वर्ष मनाउने विषयमा सबै सरोकारवालाको एकमत रहेको पाइएको छ । नेपाल भाषामा ‘स्व’ भनेको तीन र ‘ति’ भनेको तिथि अर्थात् तीन तिथिको समयमा मनाउने पर्व भएकाले स्वन्ति नखः भनिएको संस्कृतिविद्हरुको भनाइ रहेको छ । यसपटक...
सिने कला । बैंकिङ् कसूर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको जेठ ३० गतेको फैसलाले १५ दिन कैद र ३४ लाख जरिवाना ठहर भएर फरार रहेका गोरखाका राजेशबाबु श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको छ । उनलाई चितवनको रत्ननगरमा लुकिछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी आज फैसला कार्यान्वयनका लागि चितवन जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले जनाएको छ । उनले विसं २०७५ मा...
शनिबार ४ बजे सचिवालय बैठक बस्दै,ओली–प्रचण्डबिच छलफल
सिने कला । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफल सकिएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा शनिबार दिउँसो ४ बजे सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सहयोगी विष्णु सापकोटा जुगलले जनाकारी दिए। ‘दुई अध्यक्षबीच आज भएको छलफलमा भोलि (शनिबार) दिउँसो ४ बजे स्थायी समिति बैठक बोलाउने समति...
भोलि सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै ओलि र प्रचण्ड बिच छलफल सम्पन्न
सिने कला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज भएको छलफल सकिएको छ । आज भएको छलफलमा प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जुगलका अनुसार दुई अध्यक्षबीच भोलि (शनिबार) ४ बजे सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको छ । दुई अध्यक्षबीच करिब एक घण्टा छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा सहमति जुटाउन अध्यक्षद्वयबीच गत विहीबारयता...
ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनबारे छलफल
सिने कला । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन र संवैधानिक अङ्गको नियुक्तिबारे छलफल भएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाक्नु अघि ओली प्रचण्डबीच छलफल हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । कुरा मिल्ने वित्तिकै मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने तयारीमा ओली पुगेका छन्...
डलर देखाई रकम लुट्ने, भक्तपुर बाट पक्राउ
सिने कला ।भक्तपुर प्रहरीले भक्तपुर प्रहरीले डलर देखाई रकम लुटपाट गर्ने पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे घर भएका ३६ वर्षीय खेलबहादुर तामाङ, ३३ वर्षीय रेल बहादुर तामाङ, ५६ वर्षीय श्यामबहादुर तामाङ, २५ वर्षीय रामकृष्ण तामाङ र ३२ वर्षीय कान्छी तामाङ रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ । विगत केही समयदेखि भक्तपुर जिल्लाका व्यापारी,...
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्रराई: हप्तामा दुई दीन बिदा हुने
सिने कला । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भएको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज बसेको उच्चस्तरीय समूहको बैठकले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन तथा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।...
सिने कला । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओरोलो लागेको छ । यो साताको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा नेप्से लगातार तल झरेको हो । सोही क्रममा आज नेप्से २२।९१ ले ओरोलो लागेर एक हजार ५४६।१५ मा झरेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ४।८४ ले ओरोलो लागेर ३०७।३९ मा पुगेको छ । कूल १९९ कम्पनिको ७८...
कति थपिए आज उपत्यकामा कोरोना सक्रंंमीत ?
सिने कला । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ८५९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौं जिल्लामा ६९८, ललितपुरमा ७९ र भक्तपुरमा ८२ जना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर भने २०२० जना संक्रमित थपिएका छन् ।
तालिबानले अफगान भूमिबाट आतंकवादी गतिविधि हुँदैन भन्ने आश्वस्त पार्नुपर्छ : भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर
पुलमाथिबाट बग्दै गरेको पानी
काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरु आइतबारदेखि भाैतिक रूपमा सञ्चालन गर्न पाईने
चीनले भन्यो, ‘अफगानिस्तानमाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्नुपर्छ’
अझै पक्राउ परेनन् वडा कार्यालय जलाउने युवा
भीमफेदी गाइजको युट्युव च्यानलबाट ‘कचिला सुन’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजानिक
नेपाल को पहिलो द्वन्द निर्देशक स्व. गोपाल भुटानी (तामाङ)
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाह को पनि शारिरिक तापमान जाँच
चार वेदमा के छ किन पढ्ने वेद
नेपाली श्रमिक लैजान कोरिया सकारात्मक
यस वर्षको साउनमा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर नखुल्ने
कोरोना साम्य भएपछि चलचित्र निर्देशन गर्छु:राजेश हमाल
किरण माइकल घिमीरे को फेवामा टल्कीयो गीतमा तीर्थ कोजु र छुल्ठिम गुरुङ को केमीस्ट्री
भारतलाइ काउन्टर दिने नेपाल को नक्सा सार्वजनीक